Izindlela ezi-6 ezihamba phambili okufanele uzilandele lapho wakha ikhasi lokungabhalisi | Martech Zone
NgoLwesithathu, uDisemba 6, 2017 NgeSonto, uDisemba 10, i-2017 Douglas Karr
Sabelane ngezibalo ezithile ku- izizathu zokuthi kungani abantu bezikhipha ohlwini kusuka kuma-imeyili wakho wokumaketha noma izincwadi zezindaba. Okunye kungenzeka kungabi yiphutha lakho, ngoba ababhalisile bagcwele ama-imeyili amaningi kangangokuba badinga nje ukukhululeka. Lapho obhalisile ethola futhi echofoza kuleso sixhumanisi sokuzikhipha ohlwini ku-imeyili yakho, wenzani ukuzama ukubasindisa?
Ngisanda kwenza lokho nje nge Sweetwater, indawo yemishini yokulalelwayo obekukuhle ukusebenza nayo. Ngicishe ngazizwa ngingalungile ngokuchofoza isixhumanisi sokungabhalisi, kepha angivele ngithenge kaningi ngokwanele ngamadili we-imeyili afika njalo ezinsukwini ezimbalwa. Lapho ngichofoza isixhumanisi sokuzikhipha ohlwini, nakhu engilethwe kukho:
Kuphola kangakanani lokho? Esikhundleni sokuzikhipha ohlwini lwayo yonke into, ngivele nganciphisa imvamisa yaba kanye ngenyanga.
Ukube bengizothola leli khasi, bekufanele ngilinikeze u-A +! Abagcini ngokunikela ngezinketho zokuvama, basenza umsebenzi omuhle wokungazisa ukuthi yini engingase ngiyilahle kanye nokubeka okulindelwe ngakunye. Lokhu kuhambisana ne-infographic Epsilon ekhishwe, Ukuzulazula ebhokisini lokungenayo Zikhiphe ohlwini, ekhomba izindlela ezi-6 ezihamba phambili okumele wonke umthumeli we-imeyili azilandele lapho esebenzisana nokuzikhipha ohlwini:
Izinketho Zokuxhumana - yeka nekhasi lokuthi "konke noma kungenalutho" elizikhiphe ohlwini bese unikeza indlela ehlanganisiwe enikeza amazinga ahlukene okubandakanyeka.
Chofoza okukodwa uzikhiphe ohlwini - ungenzi kube nzima ukuzikhipha ohlwini. Umbono wokugcina owenzayo kumuntu okunikeze ithuba lokukhuluma naye akukhona ukubacasula ngokungabavumeli bahambe.
Sula ukuzikhipha ohlwini - usayizi omncane wefonti, ucashe ngemuva kokungena ngemvume, uqinisekisa amakheli e-imeyili… uyeke ukwenza kube nzima ukuthola nokuzikhipha ohlwini. Uma abantu befisa ukuhamba, bayeke.
Hlanza Ababhalisile - uma ufuna ukugcina ukubekwa kwebhokisi lokungenayo okuhle kanye namamethrikhi wokuzibandakanya aqinile, sula uhlu lwakho lwababhalisile abangazange bahlanganyele isikhathi esingaphezu konyaka (noma ngaphezulu uma unesikhathi sonyaka).
Ithuba Lokugcina - ngaphambi kokuhlanza ababhalisile abangahlanganyeli, benzele ithuba lokugcina lokubona ukuthi bangathanda yini ukuhlala.
Thola Impendulo - njengasesibonelweni esingenhla, bengingashiyi iSweetwater… Bengingafuni ama-imeyili abo njalonjalo. Ungakuthathi okomuntu siqu lapho obhalisile ehamba. Ibhokisi lokungenayo lanamuhla liminyene futhi kunzima ukuphatha, amakhasimende akho angahle nje afune ukugcina izinto ziqoqekile kancane. Uma ufuna ukwazi ukuthi kungani ushiyile, babuze ekhasini lakho lokuzikhipha ohlwini.
Ukuzulazula kwi-Inbox: Zikhiphe ohlwini
Tags: imvamisa ye-imeyiliepsilonimvamisauhlu hlanzahlanza ababhalisileizizathu zokuzikhipha ohlwiniamanzi amnandizikhiphe ohlwinizikhiphe ohlwini lwekhasi